महन्थ ठाकुरको प्रश्न , नागरिकतामा लाइन लाग्ने भारतीय हुन् भने दिने को हुन् ? - ParyatanBazar.com
महन्थ ठाकुरको प्रश्न , नागरिकतामा लाइन लाग्ने भारतीय हुन् भने दिने को हुन् ?
बैशाख २३ , काठमाडौँ । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्त ठाकुरले मुलुकमा व्यवस्था बदलिए पनि चरित्र नबदलिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता ठाकुरले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले मधेसीहरुमाथि सरकारले गर्ने व्यवहारमा कुनै परिवर्तन आउन नसकेको दावी गरेका हुन् । उनले विभेद नहटेको भन्दै समानताको कुरा गर्नेहरु भाषा र कपडा हेरेर विभेद गर्न लागि परेको बताए । उनले सिंहदरवार निरकुशताको प्रतिक बनेको भन्दै सारा कार्यालय निरकुशताबाट राज्य मुक्त गर्नुपर्ने धारणाा राखे । उनले संविधानको कुरा गर्दा घाउमा नुनचुक छरेजस्तो हुने भन्दै लोकतन्त्रमा न्याय माग्दा गोलि खानुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘हामीले संविधान संशोधन खोजेका हौँ । प्रस्ताव दर्ता पनि गरायौँ । तर भनिँदैछ संविधा सर्वस्वीकार्य छ । कसरी सर्वस्वीकार्य छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
अहिले पनि मधेस र थारुहट त्राहिमाममा रहेको भन्दै कुन बेला कोमाथि मुद्दा लाग्छ भन्ने पत्तो नभएको बताए । ‘रेशम चौधरी अपराधी भए जनताले कसरी जिताए ? यो रेशम चौधरीको मात्रै होइन त्यहाँको जनताको पनि अपमान भयो । अदालतको उदाहरण दिएर गोलिबाट मार्ने, धम्की दिने ? अदालत को हो ? संसदले बनाएको कानुन अदालतले ब्याख्या गर्छ,’ ठाकुरले संविधान संशोधन नगरेको प्रति आक्रोश पोखे । आफ्ना लागि परिवर्तन नभएको भन्दै उनले आफूहरु अझै अँध्यारो युगमा रहनुपरेको बताए ।
‘झयाल ढोका बन्द छ । नागरिकताको कुरा उठ्दा जहिले पनि भारतीयहरुको लाइन लागेको छ भनिन्छ । लाइन लाग्ने त भारतीय हुन् भने दिने को हुन्छ ? गृहमन्त्रालय को हो ?,’ ठाकुरको प्रश्न थियो ।
त्यस्तै उनले राष्ट्रपतिलाई मेरो सरकार भन्न लगाएर गणतन्त्रप्रति सरकारले आफ्नो असलि नियत देखाएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमलाई सतही भाषणका रुपमा लयएको बताए ।